click တစ်ချက်မှာ link ၂ ခုပွင့်ဖို့ပါ — MYSTERY ZILLION
click တစ်ချက်မှာ link ၂ ခုပွင့်ဖို့ပါ
October 2010 edited October 2010 in Blog
ဒီလိုဗျာ.. ကျနော်တို့ webpage တွေထဲမှာ သိစေချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို link လေးတွေလုပ်ပြီး ဖေါ်ပြပေးတယ်။ အဲ့ဒီ link ပေါ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သိစေချင်တဲ့ နေရာ ရောက်စေချင်တဲ့ link ကို အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်လေ။ အဲ့ဒါကို ကျနော်တို့ ပုံမှန် link ပေးရင် ဒီလိုရေးတယ်..
<a href=”www.sawsan9one.tk” target=”_blank”>www.sawsan9one.tk</a>
အဲ့ code ကိုကြည့်ပြီး မနေ့က ကျနော် ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ် click ၁ ချက်နှိပ်လိုက်လို့ link တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ဟုတ်?
click တစ်ချက်မှာ link ၂ ခုကော ပွင့်အောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလား?? ဒီလိုလေး နဲနဲပြင်ရေးလိုက်ရင်..
<a href=”www.sawsan9one.tk” target=”_blank” onclick=”window.open(‘www.edinooyin.com’,'newwin’);”>my two site</a>
click တစ်ချက်မှာ မတူညီတဲ့ link ၂ ခုပွင့်စေဖို့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒီလိုဗျာ အခုအပေါ်ကပုံစံအတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်..
my two site ဆိုတဲ့ link name ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကျနော် site ဖြစ်တဲ့ www.sawsan9one.tk ရယ် www.edinooyin.com အဲ့ဒီ site ၂ ခုလုံးကိုအလွယ်တကူပွင့်သွားမှာပါ။
Source : http://sawsan23.tk